umuthi wemali 678
umuthi wemali Ngiphonsa iziphonso zami ngosizo lwamandla okhokho bami ngokomoya, ukuphonsa kwami ​​iziphonso kwenziwa ngendlela eyingqayizivele ukusiza izinkinga zakho. Kuyisiphetho sami ukunikela ngeseluleko sami semilingo nesiqondiso esingokomoya sokusebenzela abanye.
Impilo luhambo futhi ngamunye wethu ufanelwe ukujabulela ukuhamba. Yebo kuzoba khona ukuphakama nokwehla kulolu hambo kepha yindlela esibhekana ngayo nabaphansi nokuthi sizinqoba kanjani izithiyo ezingezinhle ezichaza ukuthi singobani futhi zichaze indlela yethu nesiphetho sethu. Ngingakusiza unqobe ubuhlungu benhliziyo yakho futhi ngikufundise ukuthi uzizwe kanjani futhi ukhule kanjani futhi ube nothando.
Ake ngikusize ngezinkathazo zakho nezinkinga zakho futhi uqonde ukuthi yini okudingeka uyenze ukufeza ikusasa olifisayo. Ngiyayizwa imicabango nemizwa yabanye. Ngingasebenzisa amandla ami ukubona imizwa kothandekayo wakho. Uma ngenza lokhu uzothola ukucaciseleka ebudlelwaneni bakho. Leli ithuluzi elinamandla okufanele lisetshenziswe ngokunakekelwa ngokweqile.
I-Love Psychic ingaba ukugcwaliseka ezinkingeni nasezivivinyweni zakho zasemhlabeni. Manje yisikhathi SOKUYEKA UKUVUMELA ABANYE BALAWule IMPILO YAKHO. Sekuyisikhathi sokuba uzibuyisele empilweni yakho. Yeka ukuhamba ngemikhuba futhi usinde akuyona indlela yokuphila leyo. Udinga ukuqala ukuhlala namuhla MANJE!
Thuthukisa ngokuphawulekayo isikhalazo sakho “sokunqanda”. Lesi sipelingi singaletha ubuhle bakho bangaphakathi, sivumele abanye ukuthi babone ukukhanga kwakho kobulili, ubuntu bakho obukhangayo, izimfanelo zakho ezinhle. Ngeke nje uzizwe ungcono ngawe, kepha lapho ukubukwa nezincomo kuza kuwe, ukuzethemba kwakho kuzokhula, futhi ungazizwa uphezulu emhlabeni. Futhi kufanele ube ngoba ungumuntu okhetheke kakhulu.umuthi wemali.
Lesi sipelingi singabhebhethekisa izinto futhi sikusize ulungise izinto. Uma uke waba nokuxabana nothile, noma nje ungezwani kahle nabo futhi ungathanda izimo ezinhle ongakha ngazo, lokhu kungaba isipelingi obukade usifuna! Ngemuva kokuphonsa lesi sipelingi into yokuqala abantu abayiqaphelayo “ukuqondana kwezinto”
okuningi okusiza ukubhebhethekisa izinto nokudala umoya ofanele wokwenza. Ngezinye izikhathi kuyasiza ukunenza nobabili nizimisele ngokwengeziwe ukulalela nokukhuluma ngezinto futhi nizilungise ngendlela eyakhayo
Uma ubuqedile ubudlelwano nomuntu futhi ngeke nje bakwamukele ukuthi kuphelile, uma beqhubeka bekushayela, bekubhalela, noma okubi kakhulu, uma beqhubeka beza, lokhu-ke kungaba yilesi siphonso ositholile kade ngifuna! Ngalesi sipelingi abantu abaningi bayawuzwa umuzwa wangaphakathi njengokuhefuzela okukhulu!
Ngemuva kwalokho, isithandwa esidlule siqala ukuzama ukuxhumana kancane kancane, futhi okuvame ukwenzeka ngokulandelayo ukuthi abanye abantu bazoqala ukuzibandakanya kulesi simo ngendlela yokuthi ukunakwa kwabathandi besikhathi esidlule kuphambukiswe kude kuwe futhi banomuntu noma okuthile okunye ukugxila amandla abo!
Ukuba nebhizinisi nokuqhuba ibhizinisi kuthatha isikhathi nemizamo eyeqile, ukubekezelelana nokubekezela. Kepha akukho okuqinisekisiwe. Noma ngabe unikela ngempilo yakho kuphrojekthi noma ebhizinisini, amandla amabi endaweni yonke angavimba impumelelo yakho futhi akushiye uphuke okuncane noma ungakhombisi lutho ngemizamo yakho.
Udinga ukuvikelwa kweziphonso ezinamandla zokuvikela ibhizinisi ukuqinisekisa ukuphepha nokuchuma kwebhizinisi lakho. Lezi zinhlamvu zokuvikela ibhizinisi zenzelwe ngqo labo abangabanikazi bamabhizinisi noma abasebezoqala ibhizinisi.
Ukuhlanzwa nokuvikelwa kwebhizinisi kuzungeza ibhizinisi lakho ngamandla akhayo akhuthaza ingcebo nempumelelo. La mandla aheha amanye amandla amahle wokuletha amaklayenti amahle kakhulu, ama-ejenti, amakhasimende, nabalingani obafunayo futhi obadingayo ukuze baphumelele. La mandla angena kuzo zonke izithiyo zesikhathi nendawo futhi asebenze izimangaliso nganoma yiluphi uhlobo lwebhizinisi.
Ngeke kube khona umkhawulo empumelelweni yebhizinisi lakho ngeziphonso zami zokuvikela ibhizinisi. Lezi zilingo zingasetshenziswa noma ngabe usanda kuqala ibhizinisi, usuzovula ibhizinisi, noma ufisa ukuzinzisa ibhizinisi eselivele lisunguliwe.
Sisebenze kanzima kakhulu ukuba ngabesifazane bezebhizinisi nosomabhizinisi. Kuyinto efana nokusukela ku-zero kuya kwiqhawe. Nginesiqiniseko sokuthi akekho kithi ongathanda ukusuka kwiqhawe aye kuziro. Ungabi njalo. Vikela ibhizinisi lakho kunoma yini ezoba yingozi. Thola isipelingi esihle kakhulu sokuvikelwa kwebhizinisi kusuka ku-best spell caster. Lesi sipelingi sivikela ibhizinisi kanye nawe kunoma yikuphi ukuhlaselwa okuhlobene nebhizinisi. Kusebenzela umqashi nabasebenzi.
IMPELA YOKUVIKELA UBUTHakathi
Ubuthakathi buthathwa njengenye yezenzo zabantu eziyingozi kakhulu. Kepha akukapheli. Njengoba ubona ukuthi ngeke sikwazi ukuyisusa emphakathini wethu kodwa into esingayenza ukuzivikela kuyo. Le nqubo yokuvikela izomisa noma yikuphi ukufinyelela komsebenzi wobuthakathi noma ikuqalekise. Thola lokhu kupela futhi unciphise amandla kwanoma iyiphi imikhuba yobuthakathi.
ISIPHELELO SOKUVIKELWA KOMZIMBA
Lesi sipelingi sizobhekana nokuhlaselwa ngokomzimba kuphela. Kunokuhlaselwa komzimba okuhlukahlukene umuntu angathanda ukumvikela kukho. Sikhuluma ngezinto ezinjengokudutshulwa kwezibhamu, imimese, izingozi zomgwaqo, nomlilo nokunye. Akulula ukuphuma uphile uma usekuhlaselweni okunjalo ukuze ungeke ubeke impilo yakho engcupheni.
IZIMPAHLA ZOKUVIKELA ZIMBI
Imisebenzi yemilingo ingenye yezinto ezinzima kakhulu ukuvikela ukuhlaselwa ongabhekana nakho. Lokhu kusho ukuthi ukuze uzivikele kubo uzodinga ngempela isipelingi esinamandla kakhulu esingaba namandla okulwa nomlingo okukuphonsayo. Lesi sipelingi sisebenza ngezindlela ezimbili ezihlukene. Kukhona okumele umise umsebenzi omubi ekukuhlaseleni noma ungasebenzisa enye ezomisa ukuhlasela iphinde ikubuyisele emuva. Uthola ukukhetha ukuvikelwa okuhle kakhulu okufunayo
Kukhona ezinye iziphonso zokuvikela ongazithola njengalezo zabasebenzi basezimayini nabanye.
Previousaesthetic wicca and witchcraft